ဘီဘီစီရေဒီယိုသည်စာကြည့်တိုက်ကိုတည်ထောင်ရန်ဗြိတိန်စာကြည့်တိုက်များနှင့်ပူးပေါင်းသည် eReaders အားလုံး
ဗြိတိသျှစာကြည့်တိုက်များသည်အလွန်ကျန်းမာရေးမကောင်းပါ။ မကြာသေးမီလများအတွင်းစာကြည့်တိုက် ၃၀၀ ကျော်ပိတ်ခဲ့ရသည်။ ဒါကြောင့်စာကြည့်တိုက်များနှင့် ဗြိတိသျှစာကြည့်တိုက်ဝန်ဆောင်မှု စာကြည့်တိုက်များ၏ပိတ်ပစ်မှုအဆုံးသတ်နိုင်ရန်အတွက်သူတို့သည်အခြားအဖွဲ့အစည်းများမှအကူအညီနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများတောင်းခံနေကြသည်။ ဒီခေါ်ဆိုမှုရောက်လာပြီ ဘီဘီစီရေဒီယို နှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှအများဆုံးထူးခြားတဲ့လမ်းအတွက်။
ထို့ကြောင့်ဘီဘီစီရေဒီယိုသည်စာကြည့်တိုက်များနှင့် ပူးပေါင်း၍ လူအများစုထံရောက်ရှိနိုင်ပြီးသုံးစွဲသူများမည်သို့ကြည့်ရှုနိုင်မည်နည်းဟူသောစာဖတ်ခြင်းအသင်းကိုဖန်တီးမည်ဖြစ်သည် အပြုသဘောတစ်ခုခုအနီးအနားသို့မဟုတ်စည်ပင်သာယာစာကြည့်တိုက်သို့လာရောက်လည်ပတ်သည်.
ဘီဘီစီရေဒီယို၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအစီအစဉ်တစ်ခုပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည် စာကြည့်တိုက်များတွင်တွေ့နိုင်သောလစဉ်စာအုပ်ကိုရွေးချယ်သည် နှင့်တစ်လ (သို့) ထိုထက်ပိုသောအချိန်အတွက်ထိုစာအုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သောရေဒီယိုလှုပ်ရှားမှုများရှိလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်အသုံးပြုသူသည်ပူးတွဲလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်ဖတ်ရှုမှုများသာမကသာမကရွေးချယ်ထားသောစာအုပ်နှင့်လည်းနားထောင်နိုင်သည် ဘီဘီစီရေဒီယိုမှတဆင့်အိမ်မှပါ ၀ င်နိုင်ခြင်း.
စာအုပ်ကိုစာကြည့်တိုက် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ဘီဘီစီရေဒီယိုတို့အကြားရွေးချယ်လိမ့်မည်။ စာကြည့်တိုက်အားလုံးတွင်အလွန်ရှိရမည့်ခေါင်းစဉ်များဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအသုံးပြုသူသည်အမြဲတမ်းစာအုပ်ကိုစွန့်ခွာရန်တစ်ယောက်ယောက်ကိုစောင့်နေရန်တန်းစီစရာမလိုပါ သင်ဝယ်ယူထားသောစာအုပ်နှင့်သင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်ဤစာအုပ်ကလပ်ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်မကိုက်ညီသောအရာ။
ဗြိတိန်စာကြည့်တိုက်များရှိအကျပ်အတည်းသည်အလွန်လေးနက်သည်။ ပိတ်နေသောစင်တာများ၏အရေအတွက်သည်အလွန်မြင့်မားသည်။ ဘီဘီစီရေဒီယိုကကူညီပေမယ့်လည်းကူညီမယ်ဆိုရင်ကောင်းပါတယ် အခြားကုမ္ပဏီများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသည်စာကြည့်တိုက်များအသုံးပြုခြင်းကိုအထောက်အကူပြုသည်ရေဒီယိုနှင့် ebook များနှင့်မကိုက်ညီသောယဉ်ကျေးမှုစင်တာတစ်ခုဖြစ်သည် မထင်ဘူးလား
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » ယေဘုယျ » NOTICIAS » ဘီဘီစီရေဒီယိုသည်စာဖတ်ခြင်းကလပ်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ဗြိတိသျှစာကြည့်တိုက်များနှင့်ပူးပေါင်း